ह्वात्तै ब’ढयो सुनको मूल्य अहिले सम्मकै उच्च भाउ – तोलामा कति पुग्यो ? – Life Nepali
ह्वात्तै ब’ढयो सुनको मूल्य अहिले सम्मकै उच्च भाउ – तोलामा कति पुग्यो ?
काठमाडौँ फागुन ७ गते। नेपाली बजारमा सुनको मू’ल्यले एकपछि अर्को गर्दै नयाँ की’र्तिमान बनाइरहेको छ। बिहीबार छापावाला सुनको मूल्यले ७७ हजार ६ सयमा पुगेर ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको छ। बुधबार प्रतितोला ७७ हजार १ सय पुगेर नयाँ रर्कड बनाएको सुनको, मूल्यले बिहीबार ५ सयले बढेर फेरि, अर्को रेकर्ड बनाएको, हो। त्यसैगरी, तेजाबी, सुनको मूल्य ७७ हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको छ।
चाँदीको मूल्य पनि १० रुपैयाँले, बढेको छ। बुधबार प्रतितोला ९ सय ५ रुपैयाँमा कारोबार, भएको चाँदीको मूल्य आज ९ सय १५ रुपैयाँमा कायम छ। अहिले, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै ,सुनको मूल्य बढेको छ। विश्व, बजारमा सुनको, मूल्य बढ्नुमा शक्तिशाली राष्ट्रबीचको तनावको प्रभावलाई लिइएको छ। पछिल्लो समय अमेरिका, इरान, भारत र उत्तरकोरिया बीचको ,सम्बन्धले विश्व आर्थिक बजार तातेको छ। त्यसैगरी, अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्धले पनि विश्व बजारमा असर गरिरहेको छ।
बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस १६ सय ३ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको सुन बिहीबार बढेर प्रतिऔंस १६ सय ९ अमेरिकी डलरमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले सुनको मू’ल्य अझै, बढ्ने, बताइरहेका छन्। नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पनि सुनको मूल्य अझै बढ्नसक्ने अनुमान गरेको छ।
Previous बढ्यो बिदेशी मुन्द्राको विनिमयदर,कुन देशको कती हेर्नुहोस् !
Next पशुपतिनाथमा राष्ट्रपति पुग्दा नागाबाबालाई गु’प्ताङ्ग छोप्न निर्देशन- ५ लाखको मा’स्क वितरण !
31 mins ago Life Nepali